यी बार जन्मने मानिस जीवनमा धेरै सफल हुन्छन,तपाई कुनबार पर्नुभयो? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
यी बार जन्मने मानिस जीवनमा धेरै सफल हुन्छन,तपाई कुनबार पर्नुभयो?
ओएस नेपाल काठमाण्डौं, १ कार्तिक- ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस् । आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो ।